Epidemic vs Pandemic vs Endemic (ဝေါဟာရသင်ခန်းစာ) - Myanmar Network
Epidemic vs Pandemic vs Endemic (ဝေါဟာရသင်ခန်းစာ)
Posted by Language Republic on September 1, 2014 at 12:07 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အနောက် အာဖရိကတိုက်က ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်က နေ့စဉ်သတင်းစာတွေနဲ့ အွန်လိုင်း သတင်း ဆိုဒ် တွေက သတင်းခေါင်းစဉ်ကြီး နေရာမှာ ထိပ်ဆုံးမှာ နေရာယူထားပါတယ်။
အဲ့ဒီ သတင်းခေါင်းစဉ် နမူနာ တစ်ချို့ကို လေ့လာရအောင်။
Ebola Epidemic Ravages West Africa
Leave endemic Ebola zones- Germany tells nationals
Americans fear pandemic as Ebola patients evacuate to Atlanta
အဲ့ဒီ သတင်းခေါင်းစဉ် ၃ခုမှာ epidemic, endemic နှင့် pandemic ဆိုတဲ့ စကားလုံး ၃ လုံးကို သုံးသွားတယ်။ အဲ့ဒီ စကားလုံး တွေထဲမှာ ပါတဲ့ "dem" ဆိုတဲ့ အစိတ် အပိုင်းက လူအများ (people)၊ ဒေသ (district) လို့ အဓိပ္ပါယ် ရတဲ့ ရှေးဟောင်း ဂရိ စကား "demos" ကနေလာပါတယ်။ အဲ့ဒီ စကားလုံး တွေရဲ့ ရှေ့က ပေါင်းထားတဲ့ "epi" "en" နှင့် "pan" တို့မှာ ဒီလို အဓိပ္ပါယ် တွေရှိကြပါတယ်။
epi = among
epi (among) + demos = epidemic
an (in) + demos= endemic
pan (all) + demos= pandemic ဆိုတာဖြစ်လာကြတယ်။
ကဲ အခု ဒီစကားလုံး တစ်လုံးချင်း ကို လေ့လာကြရအောင်။
(1) Epidemic ဆိုတာ အချိန်တစ်ခုအတွင်း နေရာဒေသတစ်ခုမှာ ကူးစက်ရောဂါ ပြန့်ပွါး ဖြစ်ပေါ်တာ ကိုဆိုလိုတာပါ။
epidemic ကိုဘယ်လို သုံးသလဲ ဆိုတာကို အောက်ပါ စာကြောင်း တွေမှာလေ့လာရအောင်။
Annual influenza epidemics followawinter seasonal pattern in the United States with typical activity peaking during late December and early February.
An intense flu epidemic spreading across the nation has already takenatragic toll in Michigan.
H1N1 Flu Epidemic Fills up Texas Hospital Beds and ERs
ဒီ ဥပမာ စာကြောင်းတွေမှာ epidemic ကိုသုံးသွားတာ ကူးစက်ရောဂါ၊ နေရာဒေသ၊ အချိန် စသည်တို့ကို ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရတယ်နော်။
(2) Endemic ကတော့ adjective ဖြစ်ပြီး နေရာဒေသ တစ်ခုရှိ ပြည်သူ/ လူအချို့ မှာ ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတဲ့ ကပ်ရောဂါ အခြေအနေကို အထူးပြု ဖော်ပြပါတယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ စာကြောင်းတွေ ကိုလေ့လာရအောင်။
In many malaria-endemic countries, malaria transmission does not occur in all parts of the country.
Pertussis is endemic worldwide, even in areas with high vaccination rates.
ဒါတွေအားလုံးက ကူးစက်ရောဂါ အခြေအနေကို endemic (adj) နဲ့အထူးပြု ဖော်ပြထားတာပါ။
(3) Pandemic ကို ဘယ်မှာသုံးသလဲဆိုတော့ ရောဂါတစ်ခုခုက ဒေသတစ်ခုခုကိုကျော်လွန်ပြီး ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်ရှိ လူသားများဆီသို့ ကူးစက်လာတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
The Black Death was one of the worst pandemics in human history, killing at least 75 million people on three continents.
The Franco-Prussian War triggeredasmallpox pandemic of 1870-1875 that claimed 500,000 lives.
The 1918 Spanish influenza pandemic (is) estimated as being responsible for the deaths of approximately 50 million people or more.
(နေရာဒေသ တစ်ခုတည်း လူတစ်စုတည်း မဟုတ်တော့ဘဲ နေရာအနှံ့ ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာကိုပြောတာ။)
Epidemic ကို ရောဂါနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အခြား မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ အခြေအနေ တွေကို ဖော်ညွန်း ရာမှာလဲ သုးံပါတယ်။ အောက်မှာ ဥပမာ တစ်ချို့ ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ်။
Don't panic, the teenage pregnancy epidemic is over.
Factors Contributing to the Youth Violence Epidemic
An Epidemic of Stupidity is Sweeping across America
အခုလောက်ဆို epidemic (n) endemic (adj) pandemic (n) တို့ရဲ့ အသုံး တွေကို အခြေခံလောက်တော့ သဘောပေါက်လောက်ပါ ပြီနော်။
Dailywritingtips.com မှ Maeve Maddox ၏ Epidemic vs. Pandemic vs. Endemic ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှကောင်စီ (ရန်ကုန်) တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသစ်များကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်
ဗြိတိသျှကောင်စီ (ရန်ကုန်) တွင် General English (4 skills) အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသစ်များကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကို ၂၁ဝ၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် (အသက် ၇ နှစ်နှင့်အထက် မည်သူမဆို) သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများ လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကြေးမှာ တစ်သောင်းကျပ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား (သို့မဟုတ်) သန်းခေါင်စာရင်း/မွေးစာရင်း မူရင်းများယူဆောင်၍ တင်္နလာနေ့ မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ ညနေ (၅:ဝဝ) အတွင်း စနေနေ့နံနက် (၈:၃ဝ) မှ နေ့ လည် (၁၂:ဝဝ) အတွင်း အောက်ပါအတိုင်း ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် လာရောက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။
အသက် (၁၈) နှစ်နှင့်အထက် - စက်တင်ဘာ ၈ ရက် မှ ၁၃ ရက်
အသက် (၁၃) နှစ် မှ (၁၇) နှစ် - စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် မှ ၂ဝ ရက်
အသက် (၇) နှစ် မှ (၁၂) နှစ် - စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် မှ ၂၇ ရက်
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန်းနံပါတ် ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင်းခွဲ - ၃၁၀၆, ၃၃၁၇) သို့ တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ ညနေ (၆: ၀ဝ) အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို့ အီးမေးလ်ပို့၍ဖြစ်စေ www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar မှ message ပေးပို့၍ဖြစ်စေ ဤ call back form အားဖြည့်၍ဖြစ်စေ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Call back form ဖြည့်ပါက British Council မှဖုံးပြန်ဆက်ပေးပါမည်။